कहिलै सोच्नु भएको छ साङ्लाले बच्चा कसरी जन्माउछ ? यस्तो हुन्छ सनग्ला साङ्लाको जीवनचक्र - Himali Patrika
कहिलै सोच्नु भएको छ साङ्लाले बच्चा कसरी जन्माउछ ? यस्तो हुन्छ सनग्ला साङ्लाको जीवनचक्र
हिमाली पत्रिका १६ फाल्गुन २०७६, 3:29 pm
नेपाली समाज हरेक घरमा साङ्लोले नसताएको घर कमै भेटिएला । अँध्यारा कुनाकाप्चामा लुकेका साङ्लाहरू फुत्तफुत्त निस्केर तपाईंलाई हैरानै गर्छन् होला । गर्मि मौसम सुरु भएसंगै भान्सा कोठामा साङ्लाको बास हुने गर्दछ। तपाइलाई थाहा नहुन सक्छ साङ्लाको जन्मनका लागि भाले साङ्लाको व्रिय र पोथी साङ्ला अण्डाबाट उत्पादन हुन्छ।
पोथी साङ्लाले (फोरमोनस्) नामक केमिकल उत्पादन गरेर भाले साङ्लालाइ आफुतिर आकर्षण गर्छ। भाले साङ्लोले पोथीमा शुक्राणु डिपोजिट गरेपछि साङ्लो जन्मन्छ। करिव २० हप्ता लामो आयु रहने साङ्लाले आफ्नो जीवनकालमा चार पटक सम्म बच्चा (अण्डा) दिन सक्छ। साङ्लाले एकपटकमा ३५ देखि ४० वटा अण्डा दिने गर्दछ। साङ्ला चिसो रगत भएको आर्थ्रोपोडा वर्गमा पर्ने कीरा हो । विश्वभर चारहजार प्रजातिका साङ्लाहरु पाइन्छन।
घरबाट कसरी भगाउने ?